Zimbaabwee Keessatti Barri Bulchiinsa Mugaabee Waan Dhumate Fakkaata
Sadaasaa 15, 2017
Zimbabwe Zanu PF Meeting
Tarkaanfii Waraanaa Booda Hoogganaan Zimbaabwee Mana Keessatti Ugguraman
Kan hoogganaa Zimbaabwee yeroo dheeraa turan Robert Mugaben mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramanii jiraachuu Prezidaantiin Afriikaa Kibbaa beeksisanii jiru.
Kan hawaasa misooma biyyootii Afriikaa gama kibbaa ta’an prezidaant Jacob Zuma ibsa kennaniin Roobii ganama Prezidaant Robert Mugabee waliin dubbachuu isaanii fi mana keessatti ugguramuu isaanii kan taqan ta’uu ibsanii nagaa qabaachuu isaanii itti himuu illee dubbatan.
Afriikaan kibbaa humna ittisaa Zimbaabwee waliin quba wal qabaachuu illee beeksistee jirti.
Tarkaanfiin kun kan fudhate sochii fudhatama hin argatin kan Mugaabeen jalqaba baatii kanaa itti aanaa isaanii Emmerson Mnangagwa aangoo irraa ari’aniif deebii kennuu akkasumas haadha warraa isaaniin bakka buusuu yaaduu isaanii erga dhaga’amee booda.
Magaalaa galma mootummaa biyyattii Haraaree keessa kaleessa taankoleen asii fi achi deemaa kan turan yoo ta’u hoogganaan humnootii Zimbaabwee General Constantino Chiwenga yoo Mugaabeen paartii ZANU-PF kan deggertoota Mnangagwa diiguuf yaalan dhaaban malee tarkaanfii akka fudhatan akeekkachiisanii turan.
Erga itti aanaa prezidaantiin Sadaasa shan hojii irraa ari’atamanii booda namoonni hangi tokko to’annaa jala oolaniiru. Paartiin biyya bulchu kan Zimbaabwee Chiwengaan yaada biyya ganuu qabu jechuun himate.
Loltoonnis har’a ganama barii buufata TV to’atan.
Kan nuti ifa gochuu barbaannu kun waraanni mootummaa to’achuu isaa miti jechuu dhaan dubbi himaa kan ta’an Major General Sb Moyo dubbatan. Humni ittisaa Zimbaabwee kan inni gochaa jiru haala siyaasaa gad adeemaa deeme, haala hawaasummaa fi dinagdee biyya keenyaa daddaaqama keessa bu’e kan yoo utuu hin beeksisamin ture walitti bu’iinsa hookkaraan guutetti geessuu malu tasgabbeessuuf jedhan.
Jaarraa tokkotti yeroo dhiyaatuuf jireenyi Roobert Mugaabee kan isaan bulchaa turan biyyattii Afriikaa gama kibbaa Zimbaabwee waliin hidhata cimaa qaba.
Mugaabeen Guraandhala 21 bara 1924 bara biyyaa Briteen kutaa biyyattii gama kibbaa Rodesia keessatti dhalatan.
Abbaan isaanii achi buuteen erga dhabamee booda kan haati isaan guddiste Mugaabeen mana barnoota naannootti barachuu dhaan booda irra ofii isaanii barsiisaa ta’an. Seenaa, Afaan Ingiliffaa fi economiksii dhaan degeree argatanii jiran.
Bara 1950moota walakkeessaa qabee gara Gaanaatti imaluu dhaan kan mootummaan biyyattii barnootaa fi namoota jireenya gad aanaa qabaniif carraa kennu qalbii isaan hawate.
Akka Markist-tti ofii isaanii beeksusuu dhaan gara kutaa dhaloota isaaniitti yeroo gabaabaaf deebi’an.
Booda irra garuu Mugaabeen sab xiqqaaleen warra adii bulchiinsa Briteen irra jireessa uummata gurraachaa hacuucuu isaaniitti aaran. Poolisiin irra deddeebi’uun doorsisamanis daragaggoota fincilan kanneen obsi isaanii dhumatee fi heerri biyyattii akka jijjiiramu filachuu itti fufan.
Waldaa biyyoolessa Afriikaa kan Zimbabwe hundeessanii booda irra to’annaa jala oolan achittis sochii ripxe loltummaa fallaa bittaa warra adii jalqaban.
Lolli sunis bara 1970 ennaa Briteenii fi muummichi ministeeraa Roodeeshiyaa Ian Smith sana booda walii galteen akka hin jiraanne waan dhugoomfataniif Raodeesiyaa dhaaf bara 1980 walabummaa ishee labsan. Kanaaf biyyattiin maqaa haaraa Zimbabwe jedhamu argattee mugaabeen muummicha ministeeraa ta’an.
Bara 1987 erga mootumaa waliinii mormituu kan ta’e paartii ZAPU waliin hundeessanii booda prezidaantii ta’uun filataman.
Burkiinaa Faasoo fi Fonqoolcha Mootummaa
Istaadiyoomiin Olombee Ugurameera
Dhaabbati Maallaqa Addunyaa (IMF) Rippaablikii Koongoof Liqaa Doolaara Miliyoona 455 Raggaasise